David De Gea → Real Madrid, Cristiano Ronaldo → Man United, Jame Rodriquez → Ac Milan Emre Can → Juventus Iyo Wararkii Subaxnimo Ee Ay Qoraan Wargaysyada Caalamku – Kooxda.com
Home 2017 June Suuqa, Wararka Maanta David De Gea → Real Madrid, Cristiano Ronaldo → Man United, Jame Rodriquez → Ac Milan Emre Can → Juventus Iyo Wararkii Subaxnimo Ee Ay Qoraan Wargaysyada Caalamku
David De Gea → Real Madrid, Cristiano Ronaldo → Man United, Jame Rodriquez → Ac Milan Emre Can → Juventus Iyo Wararkii Subaxnimo Ee Ay Qoraan Wargaysyada Caalamku
June 19, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kooxda Man United ayaa isku diyaarinaysa in ay Kooxda Real Madrid ula tagto Goolhaye David De Gea Iyo lacag dhan 175 Milyan si ay u Helaan Cristiano Ronaldo (Daily Mirror).
Kooxda Liverpool ayaa la rumaysan yahay in ay Miiska u saareen Kooxda Roma dalab Dhan 40 Milyan oo ay Ku Doonayaan Kooxda Roma (Daily Mirror).
Cristiano Ronaldo ayaa wakiilkiisa u sheegay Riyadiisa Ah In Uu Ku Soo Laabto Kooxda Man United xilli uu xagaagan isaga tagi doono Real Madrid (The Sun).
Kooxda Arsenal ayaa isku diyaarinaysa in ay u dhaqaaqdo xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Genk ee Sander Berge oo lagu qiimeeyo 18 Milyan euro (The Sun).
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Kooxda Man City David Silva ayaa ciyaaraha isaga fariisan doono hadii uu ku guulaysto champions League (Daily Mail).
Weeraryahanka xulka qaranka Sweden ee Zlatan Ibrahimovic ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu ku Soo laabto Man United isaga oo diyaar u ah in uu garoomada ku soo laabto bisha Novermber (Daily Star).
Kooxda chelsea ayaa Juventus kula noqon doonta dalab ka sareeya midkii hore oo dhan 60 Milyan maalmaha soo aadan kadib markii dalabkii Hore juventus soo diiday (Daily Express).
Kooxda Ac Milan ayaa ku biirtay baacsiga loogu jiro xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka Colombia ee Jame Rodriquez (Gazzetta dello Sport).
Kooxda Juventus ayaan ka hari doonin baacsiga ay ugu jirto saxiixa khadka dhexe ee kooxda Liverpool ee Emre Can inkasta oo ay jiraan warar sheegaya in uu xiddigan ku dhowyahay in uu heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa Liverpool (Corriere dello Sport).
Juventus ayaa sidoo kale ugu cad-cad in ay hesho saxiixa xiddiga garabka uga ciyaara ee Kooxda Lazio iyo xulka qaranka Senegal ee Keita Balde (Il Tempo).
Kooxda Ac Milan ayaa wadahadalo kula jirta kooxda Juventus iyaga oo ka doonaya goolhayaha reer Brazil ee Neto (Tuttosport).
Inter Milan ayaa wali wadahadalo ku jirta kooxda Roma iyaga oo ka doonaya daafaca reer Germany ee Antonio Rudiger (Corriere dello Sport)